Taliye Ku Xigeenkii Ciidamada NISA oo Loo Xiray.. Maxaa sababayey – Balcad.com Teyteyleey
Taliye Ku Xigeenkii Ciidamada NISA oo Loo Xiray.. Maxaa sababayey
By Abdi Malik	 On Jul 31, 2017
Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa amar ku bixiyay in xabsi guri uu ku jiro taliye xigeenka NISA Cabdalla Cabdalla, kadiib markii uu xabsiga dhigay gabar iyo wiil hore uga shaqeyn jiray safaaradda Imaaraadka ay ku leedahay magaalada Muqdisho.
Ayaan Maxamed iyo Mukhtaar Nuur, ayaa xabsiga la dhigay seddex maalmood ka hor markii uu amar ku bixiyay in la soo xiro taliye ku xigeenka NISA Cabdalla, xiritaanka labada qof ayaanan la sheegin sabab aay u xiran yihiin.
Ilo wareedyo ku dhow safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ayaa sheegaya in loo xiray labadaa shaqsi kaddib markii uu codsaday safiirka Imaaraadka ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan.
Safiirka ayaa xiriir wanaagsan la leh taliyaha NISA Sanbalooshe iyo ku xigeenkiisa Cabdalla Cabdalla, waxaana ay ila wareedyadu sheegeen in uu safiirka cabsi ka qabo in aay bixiyaan sirta safaaradda maadaama ay si iskood ah shaqada uga tageen.
Waxaa baraha bulshada ka bilowday olole lagu dalbanayo in si degdeg ah loo sii daayo Mukhtaar Axmed oo ah wariye madax bannaan iyo Ayaan. Cabashada ayaa gaartay R/W Kheyre, taasoo keentay in uu xafiiskiisa ugu yeero taliye xigeenka NISA sababta aay u xiran yihiin labada qofood. Markii uu jawaab waafi ah ka bixin waayay ayaa R/W Kheyre ku amray in Cabdalla uu yahay xabsi guri inta uu ka soo noqonaayo taliyaha NISA Sanbalooshe oo safar ugu maqan dalka Sacuudiga.
Dowladda Soomaaliya ayaa qaadatay mowqif dhexdhexaad ka ah shaqaaqada siyaasadeed u dhexeysa lix waddan oo carab ah iyo dalka Qatar.
Dadka ka faalooda arrimaha carabta ayaa sheegaya in ay sii kala durkayaan xiriirka Soomaaliya iyo dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka tan iyo intii aay bilaabatay xiisada carabta.
Taliyaha NISA ayaa socdaal shaqo ugu maqan dalalka Sucuudiga iyo Imaaraadka, taasoo la aaminsan yahay in uu ka raadiyay dhaqaale. Sanabalooshe ayaa ahaa madaxii doorashada ee R/W hore Cumar Cabdirashiid, oo ah ninka Imaaraadka u qaabilsan saameynta siyaasadeed ee Soomaaliya.
The post Taliye Ku Xigeenkii Ciidamada NISA oo Loo Xiray.. Maxaa sababayey appeared first on Ilwareed Online.
Waaligii Al-shabaab Ee Gobolka Banaadi Cali Jabal oo La Qaarajiay
Qodabadee ka soo baxay kulankii Madaxweyne Farmaajo iyo Saraakiisha ciidamda qalabka sida